Zimbabwe sedzimwe nyika irikucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekukurudzira kuchengetwa kwekodzero dzevanhu kubva kumhirizhonga yemudzimba akatarwa neUnited Nations kutanga neChitatu chino.
Vachitaura paparurwa chirongwa chekuongorora mazuva aya nedare reparamende muHarare, mukuru wedare reSenate Amai Mabel Chinomona vakurudzira nhengo dzeparamende, machechi pamwe nemasangano akazvimiririra kuti vabatane kurwisa mhirizhonga yemudzimba.
Gurukota rezvemadzimai Amai Sithembiso Nyoni vati hurumende ichange ichiita hurongwa hwakasiyana-siyana pamazuva aya mukuedza kurwisa dambudziko remhirizhonga mudzimba.
United Nations inoti apo nyika dziri kurwisana nedenda reCovid-19 mhirizhonga kuvanasikana nemadzimai iri kuwedzera uye kodzero dzavo munyaya dzezvehutano hadzisi kuremekedzwa.
Vachitaura neStudio 7 mukuru weJustice for Women Muzvare Cozet Chirinda kati vanhu vavakabatsira gore rino vanga vakawanda zvakanyanya uye mhirizhonga yakawedzera zvikuru panguva iyo nyika yakapinda muLockdown vanhu vachikurudzirwa kugara mudzimba.
Muzvare Chirinda vanotiwo nzara nekusamira zvakanaka munyaya dzezvehupfumi zvakaita kuti mabopoto mudzimba awedzere.
Izvi zvakatsigirwawo naMuzvare Talent Jumo vanoshanda neKatswe Sistahood vatiwo kunyangwe hazvo vanga vasati vadorongodza huwandu hwevanhu vese vakashungurudzwa panguva yeCovid-19 dambudziko remhirizhonga mudzimba rakawedzera.
Amai Sungano Zvarehwanashe vanoti nyaya yekuti vanozviitira mabasa avo vasaende kumabasa yakakonzera matambudziko mudzimba vachikurudzirawo kuti patsvagwe nzira dzekuti vanhu varambe vari pabasa kuburikidza nekupfekwa zvekuvhara muromo nemunhu kana kuti maface masks uye kugeza maoko nesipo nguva dzose.
Dingindira regore rino rakanangana nekukurdzira mabasa ekurwisa nyaya yekushungurudzwa kwevanhu mudzimba kana kuti “Orange the World, Fund, Respect, Prevent, Collect”